Luxor Halal Travel eHalal Travel Mart oo leh Hagaha Safarka, Hoteelada Xalaasha & Dalxiisyada Xalaasha ah
Boqortooyada iyo caasimada diimeed ee Boqortooyada Dhexe (qiyaastii 2050-1710 BCE) iyo Boqortooyada Cusub (qiyaastii 1550-1080 BCE) Masar, Luxor waxay leedahay wax badan oo ay ku siiso booqdaha, laga bilaabo macbudyo waaweyn, ilaa qabriyadii hore ee boqortooyada, iyada oo loo marayo lamadegaanka quruxda badan iyo muuqaalka webiga. iyo nolol casri ah oo mashquul ah.
Sheekooyinka, dhaxalka adduunka oo lagu taxay caasimaddii hore ee Masar, wuxuu ku yaal daanta galbeed ee webiga Niil oo ku taal Luxor. Inta badan burburka Luxor iyo qabriyada ayaa ku yaal.
Magaalada casriga ah ee Luxor waxay ku taal daanta bari. Aaggan wuxuu leeyahay tareenada iyo boosteejooyinka basaska, hudheelada iyo maqaayadaha badankood, matxafyada qaar, dukaamada dalxiiska iwm. Inta badan dadka soo booqda (iyo ku dhowaad dhammaan kooxaha dalxiiska) waxay joogaan bangiga bari waxayna u safraan goobaha dalxiiska laakiin sannadihii la soo dhaafay, waxaa kordhay hudheelada ku yaal daanta galbeed dad badan oo madaxbanaana ayaa jooga.
Si kastaba ha noqotee, Luxor waxaa sidoo kale loo yaqaanaa raasamaal dhib ee Masar (sidaas darteedna waa musharrax wanaagsan adduunka). Taabadalkeed, Aswan oo koonfurta kasii durugsan ayaa ka soo horjeedkeeda oo aad u deggan. Waa bedel wanaagsan haddii aad rabto inaad ka booddo waayo-aragnimada Luxor gebi ahaanba laakiin aadan seegin quruxda Niil iyo meelaha u dhow ee soo jiidashada leh.
Cimilada guud ahaan aad ayey u kulushahay xagaaga, halka xilliga qaboobaha guud ahaan waa diiran tahay, laakiin waxaa laga yaabaa inay qabowdo habeenkii. Cimilada ayaa ah mid aad u qalalan oo ku dhowaad roob la'aani jirto qorraxduna way iftiimaysaa sannadka oo dhan. Waqtiga ugu wanaagsan ee la booqan karo waa xilliga qaboobaha, laga bilaabo Noofambar illaa bilowga Maarso.
Garoonka diyaaradaha Luxor
Fiisooyinka imaatinka waxaa heli kara ajaanib badan oo ajnabi ah, isla marka aad soo gasho dhismaha Terminalka aad diyaaradda ka tagto. Waa US $ 25 ama u dhiganta, iyadoo inta badan lacagaha qalaad ee waaweyn la aqbalo.
Gegada diyaaradaha ee Luxor waxay duulimaadyo toos ah ka heshaa magaalooyin badan oo Yurub ku yaal, badankooduna waa fasaxyo xirmo oo loo dhan yahay, laakiin badanaa waxay diyaar u yihiin inay duulaan duulimaad kaliya. Sidoo kale waxaa jira duulimaadyo toos ah oo ka yimaada waddamada Khaliijka. Egyptptair iyo tartamayaashu waxay si joogto ah uga duulaan Qaahira (1 saac), iyadoo safarada maalinlaha ah ay suuragal tahay labada dhinacba, iyo xiriir wanaagsan oo Yurub ah. Gaaritaanka Luxor ee Alex ama Sharm el-Sheik badanaa waxay ku lug leedahay isbeddelka Qaahira, mararka qaarkoodna joogsiyo dhaadheer.
Madaarka Caalamiga ah ee Luxor (6 km dhanka bari kaga beegan magaalada). Xarumaha loogu talagalay rakaabka waxaa ka mid ah xafiiska boostada, bangiga, ATM, xafiiska isbeddelka, maqaayadaha, maqaayadaha, VIP Lounge, dukaan bilaa cashuur ah, weriyaha / tobacconist, dukaan farmashiyaha, dukaan hadiyadeed, wakaalad socdaal, miiska caawinta dalxiiska, kirada baabuurta. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Helitaanka halkaa: ma jiraan basas dadweyne oo u dhexeeya garoonka diyaaradaha iyo Xarunta Magaalada. Haddii aadan haysan shil uu ku siiyay hudheelkaagu, qaado taksi, kaas oo aan ka badnayn LE60-80. Iska indho -tirinta darawalada tagaasida iyo touts -ka ka baxsan albaabada garoonka diyaaradaha. Socodka sii wad ilaa aad ka hesho taksiile baabuurkiisa ka dibna wada xaajood. Si adag u xaji shandadahaaga maaddaama dadku ay kaa caawin doonaan inay kaa jeexaan, u qaadaan inta badan 5 m tagsiga & istaanka baska, ka dibna dalbadaan lacag. “Lah shukran, lah shukran. . . ": Wax badan ayaad ka sheegi doontaa Luxor.
Saldhigga tareenka ee Luxor
Luxor waxay ku taal khadka tareenka ee raaca webiga Niil waqooyiga ilaa Qaahira (10 hr) iyo koonfurta ilaa Aswan (3-4 saac). Tareenku waa hab fiican oo loogu safro inta u dhexeysa Aswan iyo Luxor maadaama ay aad u gaaban tahay in la duulo, basaskuna ay yihiin kuwo kacsan oo aan gebi ahaanba ammaan ahayn. Tareenku wuxuu u socdaalaa kana soo noqdaa Qaahira waa iska cadahay inuu ka gaabisanyahay duulimaadka, laakiin waa mid raaxo leh oo aamin ah, oo si layaablehna u jaban.
Laga soo bilaabo Qaahira waxaa jira afar nooc oo tareen ah:
Maalintii ayaa muujisa waxay leeyihiin tababarayaal hawo qaboojiyeyaal ah oo kala ah AC1 iyo AC2 oo leh kuraas diyaaradeed oo raaxo leh. Waxay yihiin hab raaxo leh oo ay dib ugu fadhiistaan ​​una daawadaan muuqaalka dhirta badan ee dooxada Niilka. Qiimaha (laga bilaabo Febraayo 1) wuxuu ku kala duwan yahay tareenka, iyadoo hal tigidh ah Qaahira-Luxor qiimahiisu yahay LE2 illaa LE2018 ee AC115, iyo in ku dhow 200-1% ka yar AC30. Cabitaannada fudud iyo kuwa fudud ayaa la siiyaa, waxaana jiri kara gaari cunto, laakiin sida ugu fiican horay u sii iibso cuntada iyo cabitaanka ka hor.
Habeenku muujiyo, Safraya 9PM ilaa 11PM, waxay lamid yihiin tareenada maalintii oo waxay leeyihiin isku qiimo; maahan hurdo
Hurdada Deluxe waxaa maamula shirkad gaar loo leeyahay, Watania. Kuwani waxay leeyihiin gawaari casri ah oo hawo-qaboojiyeyaal ah, oo leh xulashooyinka 1 iyo 2-berth iyo baabuur naadi / qol. Cunto fiidkii iyo quraac ayaa lagu raacinayaa qiimaha rakaabka. Laga bilaabo Febraayo 2018, qiimaha hal wado u dhexeeya Qaahira iyo Luxor ama Aswan waa US $ 110 halkii mar, ama US $ 80 oo wadaaga qol 2-berth ah. Hal hurdo ayaa soconaya habeenki sanadka oo dhan, dhanka koonfurta wuxuu uga socdaa magaalada Qaahira Ramses agagaarka 8PM, wuxuuna woqooyi uga socdaa magaalada Luxor agagaarka 11PM. Hurdada dheeriga ah waxay socdaan xilliyada mashquulka laakiin ogow in tareenkaan laga yaabo inuu ka bilowdo Giza halkii laga bilaabi lahaa xarunta Qaahira Ramses.
Tareennada maxalliga ah - Tababaro aan a / c ku tababbaran alwaax u dhexeeya Qaahira iyo Luxor, maalin iyo habeen, joogsada saldhigyada badankood - xoogaa ka bilow Alexandria. Kuwani wax badan kama gaabin, laakiin si aad ah ayey u jaban yihiin.
Inta badan tareenadan waxay kusii socdaan Aswan (tan iyo markii ay ka soo bilaabeen Qaahira, inta badan way daahaan markay ka baxaan Luxor). Xawaaraha waxaa maamula Shirkadda Tareennada Qaranka ee Masar (ENR) - hubi jadwalka iyo qiimaha, sameysid ballansasho, iyaga oo toos ah. ENR sidoo kale waxay maamushaa tareenada caadiga ah laakiin kuwani ma ahan kuwo la xajin karo oo aan lagu soo bandhigin jadwalka, tikidkaaga ka iibso saldhigga. Kuwa seexda luqada 'de luxe' waa in khadka tooska ah looga qoro Watania.
Tigidhada tooska ah sidoo kale waa laga iibsan karaa saldhigga laakiin 2017/18, xarumaha Qaahira Ramses iyo Giza ayaa inta badan diiday inay tikidhada maalinlaha ah ka iibiyaan dalxiisayaasha, iyagoo ku andacoonaya in kaliya loo ogol yahay tareenka habeenkii. Tani waa bunkum mana jiraan dhibaatooyin la mid ah oo tikidhada noocaas ah laga iibsado saldhigyada kale, woqooyi u socda Aswan / Luxor ilaa Qaahira, khadka tooska ah ama xitaa marka si fudud loo raaco tareenka maalinlaha ah iyada oo aan la helin tigidh (ka dibna kaliya u bixi kalkaaliyaha tareenka, hase yeeshee sidan ayaad ugu guuleysatay ' t aad u hesho lambar kursi loo qoondeeyey oo aad halista ugu yaraan istaagto qayb ka mid safarka ah).
Saldhigga tareenka ee Luxor. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Basasku waxay si joogto ah uga baxaan gadaasha Macbadka Luxor, illaa magaalooyinka waaweyn badankood. Basku waa wado wanaagsan oo ka timaada / u tagta Hurghada, tusaale:
Bas raac (Saldhigu wuxuu woqooyi ka xigaa saldhiga tareenka laga soo galo ee ku yaal Luxor). Ku socota Hurghada 8:00 AM iyo 3:30 PM, LE110 (Jan 2019). (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Sare Egypt Bus Co.. Ka amba baxaa Hurghada (oo ku ag taal El-Fardous Hotel, El-Maer St.) 10:00 AM, 1:00 PM, 7:30 PM, 10:30 PM, 1:00 AM, 3:00 AM. 2½ saac Laga soo bilaabo LE40 hal wado. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Wixii tareenka Aswan ayaa ka fiican. Qaahira ama Alexandria sidoo kale tareenka raac ama duul.
Doomaha doomaha ee Nile waxay si joogto ah ugu wacaan Luxor, laakiin kuwani waa safaro xirmo oo aan la heli karin si loo xajiyo barta tilmaamida doonta.
Waxaa suuragal ah inaad Aswan ku gaarto markab felucca ee webiga Niil. Marka hore waxaad u safri doontaa koonfurta tareen ama microbus si aad ugu biirto felucca-ka Edfu, maadaama aysan ku sii jeedin doonin woqooyiga qufulka webiga Niil ee halkaas ku yaal. Safarka webiga wuxuu qaadanayaa laba maalmood. Qiimaha ayaa si duurjoog ah loogala xaajoon karo, filo qiimaha bilowga ah ee LE700 oo ujeeddadiisu tahay in la dejiyo LE300.
Luxor waxaa ka buuxa dukaamo kiro ah oo loogu talagalay baaskiilada, hudheelo badan oo badan ayaa sidoo kale kireysta baaskiilado. Qiimaha kirada ayaa ku kala duwan qiyaastii LE5-20, iyadoo kuxiran xirfadahaaga gorgortanka, baahida qaraabada ah ee loo qabo baaskiilada maalintaas iyo tayada baaskiil la sheegayo. Hubi taayirrada oo ka taxaddar daqiiqadda ugu dambeysa ee sii kordheysa maadaama ay sida ugu dhaqsaha badan u kalifayaan. Waa wax iska caadi ah in lagu weydiiyo inaad ka tagto baasaboorkaaga, liisanka darawalnimada ama kaarka aqoonsiga ardayga oo dhigaal ahaan ah. Baaskiilada ayaa laga kireysan karaa labada Bangi ee Bariga iyo Galbeedka ee Luxor (kan dambe oo u dhow markabka maxalliga ah laga soo dego), in kasta oo xulashada iyo tayada baaskiiladu ay inta badan ka wanaagsan yihiin Bariga, oo qiimayaashuna ay aad uga yara bateen kuwa go'doonsan Galbeed. Haddii aad raadiso baaskiil tayo sare leh, waxaad ka heli kartaa baaskiilada Nederlandka (gazelle / batavus) wakaaladda kirada ee Dutch-ka ee ku taal Sheraton Street (East Bank) iyo Souk isla marka aad doonta ka baxdo (West Bank). Baaskiilada ayaa lagu raaci karaa markabka maxalliga ah (tixgelin si kastaba ha noqotee), markaa laga yaabee inaad kireysato Bariga, ka dibna baaskiilkaaga ku sii qaado. La soco taraafikada Masaarida kahor intaadan go'aansan inaad rabto inaad baaskiil ku dhex marto.
Bangiga Bariga waa magaalada weyn, sidaa darteed tixgeli taraafikada iyo dadka badan intaad go'aansaneysid inaad baaskiil ka raacaysid dhinacaas. Bangiga Galbeed ee ka soo horjeedka ayaa ah mid aad u badan oo reer miyi ah, iyo in badan oo booqdayaashu waxay doortaan baaskiil dhexdooda beeraha halkaan inta ay u dhexeeyaan goobaha dalxiiska.
Goobaha, waardiyayaashu waxay isku dayi doonaan inay kaa dhaadhiciyaan inaad iska ilaaliso inaad xirato baaskiilkaaga maadaama ay daawan doonaan. Kuwaas oo ay sifiican u qaban doonaan, ka dibna ay ka dalban doonaan talo bixin sidaas ah. Qufulkaaga baaskiil ku xir si aad uga fogaato kharashkaan aan loo baahnayn.
Xitaa geesinimo dheeraad ah, Luxor wuxuu la socdaa mootooyinka Shiinaha agagaarka 150cc. Xirfadaha gorgortanka saxda ah waxaad mid ka mid ah ku shubi kartaa LE50 saacaddii, ama ka yar maalinta ama fiidkii. Xilliga kuleylaha, waddooyinka ku teedsan Daanta Galbeed waa kuwo faaruqi ah, mootada ku wareegsan burburka iyo buuraha waa mid sahlan oo wax ku ool ah. Xilli gaabis ah, qaar badan ayaa diyaar u ah inay kaa kireeyaan mootadooda qiimaha saxda ah. Weydiiso koofiyad - ma heli doontid mid kale haddii kale.
Tagaasida ayaa ku badan Luxor. Ma leeyihiin mitirro, laakiin waxaa jira qiimayaal hadda la aqbali karo haddii aad ku adkeysato. Safarada gaagaaban ee gudaha Luxor waxay udhaxeeyaan LE15 iyo LE25 (dalabkii ugu horeeyey ee darawal taksi ayaa laga fursan doonaa wuxuu noqonayaa LE50 +). Safar wareeg ah oo ku aaddan Daanta Galbeed wuxuu ku saabsan yahay LE100.
Dalxiiska 'Sheraton Luxor Resort' wuxuu leeyahay liis ay ku qoran yihiin heerarka tagaasida ee hadda (qaaliga ah) hudheelladooda illaa dhowr meelood oo loo isticmaali karo tixraac ahaan waxtar leh.
Ku safrida bas yar magaalada Luxor
Gawaarida yar yar waa gaadiidka dadka deegaanka ee ku nool Luxor, iyo habka ugu jaban ee lagu ag wareego dalxiiska xiisaha leh. Dhammaantood waxay leeyihiin qaab isku mid ah sidaa darteed si fudud ayaa loo aqoonsan karaa. Waxay leeyihiin wadooyin go'an, oo leh wadooyin kala duwan oo lagu calaamadeeyay midab ka duwan dhinaca baska yar. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan khariidado jidadka, dadka maxalliga ah waxay umuuqdaan inay garanayaan iyaga oo wadnaha ku haya. Dhammaan jidadka basaska waxay umuuqdaan inay kuxiran yihiin xarunta tareenka. Bas ku salaama adiga oo fiirinaya inta uu ku soo dhowaanayo, oo kor u qaad gacantaada. Markuu basku buuxo ma istaagayo (waxaa baska fadhiya ku dhawaad ​​14 kursi). Haddii kale waad ku boodi kartaa, fadhiisan kartaa meel bannaan, oo aad lacag ugu gudbin kartaa darawalka, LE1.50 guri oo qofkiiba ah (laga bilaabo Janaayo 2019) si aad u raacdid (hagoog looma baahna). Markaad bixin weydo intaad fadhiisanaysid, waxay u qaadan doonaan inaadan garanayn qiimaha oo darawalku wuxuu kaa qaadi doonaa LE2 markaad ka degto. Soo degitaanka waa suurtagal wakhti kasta, waxaana lagu sameeyaa iyadoo si fudud darawalka looga codsado inuu istaago.
Qaab muhiim ah oo loo maro inta u dhexeysa bangiyada Bariga iyo Galbeedka Luxor waa in la isticmaalo doon. Doonta maxalliga ah ee buluuga ah waa doon aad u aasaasi ah oo u dhexeeya Bariga iyo Galbeedka oo LE2 uga kacda ajaanibta (laga bilaabo Oktoobar 2018). Dhinaca kale waa in doontu ay baxdo oo keliya markay buuxdo, ama marka doon kale ay timaaddo, markaa qaadashada doonta ayaa guud ahaan gaabis ah inkasta oo aad ka fogaanayso hagidda. Si kastaba ha noqotee, inta lagu jiro maalinta doomaha ayaa inta badan baxa inta badan oo aan waqtigaaga lumin. Tagaasida waxaa laga heli karaa boosteejada doonta labada dhinacba, safarku wuxuu qaadanayaa daqiiqado kooban.
Haddii kale, bilaabista mootada (oo badanaa loo yaqaan "qadada") ayaa kugu wareejin doonta, tusaale ahaan laga bilaabo hudheelka Jiilaalka ee loo yaqaan 'Winter Palace Hotel' ilaa laga soo galo xeebta Bariga-illaa Oktoobar 2018, LE20 hal ama laba qof maalintii, ama LE25 habeenkii (Adiga ayaa waxay u badan tahay in wax badan la weydiin doono, sidaa darteed hagggugga ayaa habboon) Haddaad wabiga aadayso ama aad hoos marayso, tusaale ahaan Karnak Temple ama Matxafka Luxor, waxay u badan tahay inaad bixiso LE30 ama in ka badan.
Markaad ag socoto wabiga, daraasiin milkiilayaasha felucca ah ayaa sidoo kale ku siin doona adeegyadooda si ay kuugu jiidaan wabiga, oo caadi ahaan taksi wadaha ayaa ku sugnaan doona dhinaca kale.
Gawaarida loo yaqaan 'Calèches', ama gawaarida faraska lagu jiido, ayaa caan ku ah bangiga bari waana hab lagu farxo oo lagu arko magaalada, gaar ahaan xilliyada habeenkii. Qiimayaashu way kala duwan yihiin iyadoo loo eegayo xirfadda gorgortanka, laakiin LE20 saacaddiiba waxay umuuqataa wax caadi ah.
Si kastaba ha noqotee, tiro ka mid ah kooxaha u dooda xuquuqda xayawaanka ayaa ka taliyay in aan la dhaqin sababo la xiriira daaweynta fardaha oo xun. Maaha wax aan caadi ahayn in darawalada ay garaacaan fardahooda, inta badan dalxiisayaasha reer Galbeedkuna waxay arki doonaan xayawaanno badan oo caato ah oo nabar leh. Tan macnaheedu maaha in wadayaasha oo dhan laga fogaado, qaarkood waa sumcad. Isticmaal caqli gal markaad dooranayso.
Ka taxaddar inaad isticmaasho isla darawal dhowr maalmood oo isku xigta. Dhamaadka wuxuu go'aansan karaa inuu si xoog leh kuugu soo raacay safaradaadii hore wuxuuna weydiisan karaa waxyaabo badan oo dheeraad ah, waxyaabaha "aan ku jirin", sida sugitaanka intaad booqanayso macbudka, dhammaan lacagihii la bixiyay kahor intaan la aadin kan madaxda u ah iyo midna darawalkaaga, caarada faraska, qiimaha asalka ah. Way fiicnaan kartaa in la isticmaalo darawal kale safar kasta oo aan la ballansan darawal horay loo isticmaalay si looga fogaado dhacdadan suurtagalka ah inay dhacdo xitaa haddii uu u muuqdo inuu ka raaxo badan yahay bilowga.
Sidoo kale waa suurta gal inaad ku dhex socoto degmada dalxiiska adigoo lugeynaya inta lagu jiro qeybaha qabow ee maalinta, haddii aad leedahay dareen wanaagsan oo jiho ah. Si looga fogaado feejignaanta aan loo baahnayn waxaad u baahan doontaa inaad si joogto ah ugu celiso ereyada "dhib ma leh", ama "laa, shukran", oo macnaheedu yahay "maya, mahadsanid" oo Carabi ah. Sidoo kale, udiyaar garow inaad ucodeyso booliska dalxiiska hadaad wax walaac ah kaqabtid amaankaaga. Had iyo jeer waxaa had iyo jeer dhow qaar ka mid ah booliska maxaa yeelay sidoo kale waxay xiran karaan dhar shacab.
Xeelad wanaagsan oo looga fogaado dhibaatada ayaa ah inaad iibsato warqad Masaari ah maalin kasta (oo Carabi ah) oo aad tan sidato. Dadka maxalliga ahi waxay u qaadan doonaan inaad taqaanid Carabiga (oo markaa khiyaanooyinkooda) oo ay kaa daayaan keligaa. Waraaqaha Masaarida waxay ku kacayaan qiyaastii LE1.
Gaddis Luxor Hotel Suites & Apartment
Maritim Jolie Ville Luxor Island Dalxiis
Wadaage Tutotel Hotel Luxor
eHalal Safarka Mart > Safarka Masar Xalaal > Safarka Luxor Xalaal
Hilton Garden Inn Airport Toronto	    